Dr. Tint Swe's Writings: Union spirit of Bogyoke Aung San ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် (က)
Union spirit of Bogyoke Aung San ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် (က)
ဤကမ္ဘာ၌ များစွာသောနိုင်ငံတို့သည် လူမျိုးအများအပြား ပါဝင်ပေါင်းစပ်လျက် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြ၏။ ဤသို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည့် ပြည်ထောင်စုများအနက် အချို့သော ပြည်ထောင်စုတို့၌ တန်းတူညီမျှသော အခြေခံဖြင့်ဖွဲ့စည်းကာ၊ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါးကို အညီအမျှပြု၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ငြိမ်းချမ်းလျက်ပင်ရှိကြ၏။ ပြဿနာကြီးငယ် ပေါ်ပေါက်သည်ကိုလည်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းကာ ပြေငြိမ်းစေ၏။ အချို့သော ပြည်ထောင်စုများတွင်မူ အပေါ်စီးရနေသော၊ အင်အားကြီးသော၊ လူဦးရေအားဖြင့် များသောလူမျိုးများက လွဲမှားသော အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို ကျင့်သုံးလျက် လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ကြ၏။ ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ရာ၌လည်း မညီမျှသော အခွင့်အရေးများကို ပြဌာန်း ကျင့်သုံးကြ၏။ အချို့မှာမူညီမျှသော အခွင့်အရေးများကိုပင် ပြဌာန်းထားသော်လည်း၊ ထိုအခွင့်အရေးများကို ကျန်လူမျိုးများက မကျင့်သုံးနိုင်အောင် ဖိနှိပ်လွှမ်းမိုးထားကြ၏။ ထိုကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ လူ့အခွင့် အရေးများတွင် မညီမျှမှုဖြစ်ပေါ်ကာ နက်ရှိုင်းသော အမျိုးသားရေး ပြဿနာ များပေါ်ပေါက်လာကြ၏။ လူမျိုးအချင်းချင်း မကြေနပ်မှု၊ မုန်းတီးမှုများ ပွားများ၍ ပဋိပက္ခများ ကျယ်ပြန့်လာ၏။ နောင်သောအခါ ပြည်ထောင်စုကြီးပါ ပြိုကွဲ ပျက်စီးရပေသည်။
ပြည်ထောင်စုကြီးကို ဖွဲ့စည်းရာ၌လည်း ကွဲပြားခြားနားသည့် လူမျိုးများ၏ မတူညီ ကွာဟသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ အခြေခံများပေါ်တွင် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းကြရ၏။ ထိုအခြေအနေများကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍ လွဲမှားသော အမျိုးသားရေးဝါဒ ကျင့်သုံးကာ လူမျိုးတမျိုးက ကျန်လူမျိုးများအပေါ် စိုးမိုး ချယ်လှယ် အုပ်ချုပ်လေ့ရှိကြပေသည်။ လွဲမှားသော အမျိုးသားရေးဝါဒဆိုသည်မှာ မိမိတို့လူမျိုးသည် မြင့်မြတ်သော အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်ဟူ၍ ကြွေးကြော်လျက် ထိုသို့ မြင့်မြတ်သည့် အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ခြင်းသည် ပင်လျင် အခြားသော လူမျိုးများအား စိုးမိုးအုပ်ချုပ်စီမံခွင့်ရှိသည့် နိမ့်ကျသော အမျိုးအနွယ်များကို ဖိနှိပ်စိုးမိုးချယ်လှယ်ရန် အခွင့်အရေးများ ရှိသည်ဟူ၍ ယူဆတတ်ကြသည်။ ထိုအယူအဆဖြင့်ပင် ပြည်တွင်း၌ ဖိနှိပ်စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ပြီး အင်အားကြီးထွားလာသောအခါ ပြည်ပနိုင်ငံများကို အင်အားသုံး၍ ကျူးကျော် သိမ်းပိုက်ခြင်းများ ပြုလုပ်တတ်ကြပေသည်။ မှန်ကန်သောအမျိုးသားရေးဝါဒမှာမူ မည်သည့်လူမျိုးရေး ဖိနှိပ်မှုကိုမဆို ပြတ်သားစွာ ဆန့်ကျင်၏။ မိမိလူမျိုးအား အခြားလူမျိုးက ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သည်ကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ရုံ သာမက မိမိလူမျိုးက အခြားလူမျိုးအပေါ် ဖိနှိပ်ချယ်လှယ်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်သည်ကိုလည်း ဆန့်ကျင်ပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲများတွင် မှန်ကန်သော အမျိုးသားရေးဝါဒကို ကိုင်စွဲကာပြည်သူလူထု ကြီးတရပ်လုံးကို စည်းရုံး သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ထူးခြားသည်မှာ မှန်ကန်သော အမျိုးသားရေးဝါဒကို ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ပေါင်းစည်းပြီး အမျိုးသား သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် (၁၉၃၂) ခုနှစ်လောက်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ် (ဝါ) အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ရင့်ကျက်လာပြီး အမျိုးသားပညာရေး တိုက်ပွဲများတွင် ပါဝင် ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၃၆) ခုနှစ် ကျောင်းသား သပိတ်ကြီးမှာ ပါဝင်ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ သပိတ်ကြီးအပြီးတွင် နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲသို့ ခြေစုံပစ်၍ဝင်ခဲ့သည်။ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာသည်။ (၁၃ဝဝ) ပြည့် အရေးတော်ပုံတွင် ပါဝင်ဦးစီးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ကို တည်ထောင်ကာ လွတ်လပ်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။
ဤသို့ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးခေတ်တွင်ချမှတ်ခဲ့သော ဗမာပြည်သည်ဒို့ပြည်၊ ဗမာစာသည် ဒို့စာ၊ ဗမာစကားသည် ဒို့စကား၊ ဒို့ပြည်ကို ချစ်ပါ၊ ဒို့စကားကို ချီးမြှင့်ပါ၊ ဒို့စာကိုလေးစားပါဟူသည့် အမျိုးသားရေးဝါဒအလံကိုပင် ကိုင်စွဲခဲ့ပေသည်။ မြန်မာတမျိုးသားလုံးသည် အမျိုးသားရေးစိတ် နိုးကြားလာပြီး ဝိုင်အမ်ဘီအေ၊ ဂျီစီဘီအေ အသင်းချုပ်ကြီးအောက်တွင် ညီညွတ်သော အင်အားစုအဖြစ် စုစည်းမိခဲ့ကြသော်လည်း အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့၏ ပရိယာယ် ကျောက်ဆောင်များ ဖြစ်သော တွဲရေး/ခွဲရေး၊ ဒိုင်အာခီ အုပ်ချုပ်ရေး၊ (၉၁) ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးများနှင့် တိုက်မိသောအခါ ပြိုကွဲခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ပြိုကွဲနေသော အမျိုးသားအင်အားစုများ၏ ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်သည့် အနေဖြင့် ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂိုဏ်းအဖွဲ့ကြီးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပေသည်။ ထိုအဖွဲ့ကြီးသည် ပါတီပေါင်းစုံ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အဖွဲ့ကြီးဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ကြီး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးဟူ၍ ဖေါ်ပြထားပေ သည်။ ဤသို့အားဖြင့် အမျိုးသားရေးဝါဒကိုပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေ နှင့်ကိုက်ညီအောင်ချမှတ်ခဲ့ပေသည်။ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားနှင့် လူထုလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံကိုလည်းစည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ၄င်းအပြင် ရဲဘော် (၃ဝ)မှ သောင်းချီသော အမျိုးသားတပ်မတော်ကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပေ သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်သော ဖတပလ (နောင် ဖဆပလ)ကိုဖွဲ့စည်းလျက် တပ်မတော်ကိုပါ ၄င်းအဖွဲ့နှင့် ပေါင်းစပ်ပေးကာ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ နောင် ဗြိတိသျှတို့ကို နိုင်ငံရေးအရ တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင်လည်း တမျိုးသားလုံးကို သိပ်သိပ်သည်းသည်းဖြင့် နက်ရှိုင်းစွာ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပေသည်။
သို့ရာတွင် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ဗမာတမျိုးသားလုံးကို စည်းရုံးနိုင်ရုံမျှနှင့် မပြည့်စုံ၊ မလုံလောက်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပါဝင်သော အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည်ကို ကြိုတင် သိမြင်ခဲ့ပေသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသား စည်းရုံးရေးကို အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းခဲ့ပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုကို ဂျပန်ခေတ်၌ စတင်တွေ့ရပေသည်။
ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲသည် တမျိုးသားလုံးအကျိုးဖြစ်ရကား မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေအားဖြင့် အတော်အသင့်များသည့် ကရင်အမျိုးသားများပါဝင်လာရေးသည် အရေးကြီး ပေသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ကရင်အမျိုးသားများကို မစည်းရုံးနိုင်လျှင် တနည်းအားဖြင့် ကရင်အမျိုးသားများ မပါဝင်လျှင် အခက်အခဲများရှိနိုင်ပြီး ကရင်နှင့်မြန်မာအမျိုးသားများပါ နစ်နာမည်ကို ကြိုတင်သိမြင်ခဲ့ပေသည်။ ထို့အပြင် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲတရပ်လုံးတွင် ကရင်အမျိုးသားများ ပါဝင်လာရေးအတွက် စည်းရုံးရေးသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သကဲ့သို့ ကရင်-ဗမာညီညွတ်ရေးသည် အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးနှင့် လွတ်လပ်ရေးအတွက် သော့ချက်ကျသော ပြဿနာတရပ်ဖြစ်သည်ကိုလည်း သဘောပေါက်ခဲ့ပေသည်။
ထိုအချိန်၌ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ကရင်-ဗမာလူမျိုးရေးဆန်သော ပြဿနာများ စတင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပေရာ ဗိုလ်ချုပ်သည် ကရင်-မြန်မာ ညီညွတ်ရေးအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းခဲ့ရပေသည်။ ကရင်ခေါင်းဆောင်များကို ရန်ကုန်သို့ ဖိတ်ခေါ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည့်အပြင် ပြည်သူလူထုကိုလည်း ကရင်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအတွက် ဟောပြောစည်းရုံးခဲ့ပေသည်။ ထို့အပြင် ကရင်အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်များကို တပ်မတော်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်စေခြင်း၊ အထူးသဖြင့် ဗြိတိသျှ လက်အောက်တွင် အမှုထမ်းခဲ့ကြသော ကရင်အရာရှိများကိုလည်း အမြင်ကျယ်စွာဖြင့် တပ်မတော်တွင် နေရာပေး သိမ်းသွင်းခဲ့ပေသည်။
ဤသို့ ကရင်ဗမာစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်၏ မှန်ကန်သော အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် တိုင်းရင်းသားများအပေါ် သဘောထားကို ကရင်အမျိုးသားညီလာခံကွန်ဖရင့်သို့ ပေးပို့သော ဗိုလ်ချုပ်၏သဝဏ်လွှာက အလေးအနက် သက်သေပြလျက်ရှိပေသည်။
ကရင်အမျိုးသား ရဲဘော်အပေါင်းတို့ -
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများသို့ ယခင်အခါ ကျွန်ုပ်လှည့်လည် လာရောက်စဉ်က ကျွန်ုပ်အား ကရင်အမျိုးသားများ၏ အကြီးဆုံးမိတ်ဆွေ တဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုစေလိုကြောင်း ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်ကို ရဲဘော်တို့ အချို့ ကြားမိကောင်း ကြားမိပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည် ယခုတဖန် ဤစကားကို ထပ်မံ ဖေါ်ပြကမ်းလှမ်းလိုပါသည်။ ဗမာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးများ တစည်းတရုံးတည်းဖြစ်မှုကိုလည်းကောင်း၊ ဗမာနိုင်ငံလူမျိုးများသည် မှန်ကန်သော လူမျိုးရေး တရားလက်ကိုင်ထား၍ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့နှင့် အကျိုးတူ ဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ရှေးယခင်ကစ၍ ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ယုံကြည်သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဤစိတ်ထားမှာ ယခုစစ် အခြေအနေတွင် ခါတော်မီဝါဒသဘော မဟုတ်သည်ကို တိတိလင်းလင်း နားလည်စေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ စေတနာသည် ကရင်အမျိုးသားများအပေါ်သာမက ဗမာနိုင်ငံလူမျိုးအားလုံးပေါ်တွင် ထားပါသည်။ ဤစေတနာ ဤစိတ်ထားသည် တနေ့နေ့ လက်ငင်းအားဖြင့် လက်တွေ့ ကျွန်ုပ် ပြနိုင်သည့်အခါတွင် ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
လူမျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏သဘောထားကို အကျဉ်းအားဖြင့် ဖေါ်ပြရသော် အောက်ပါအတိုင်းပင် ဖြစ်ပါသည်-
၁) မည်သူမဆို ဘာသာ၊ သာသနာအရေးတွင် လွတ်လပ်စွာ မိမိတို့ကိုး ကွယ်လိုရာ ဘာသာကို ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိရမည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ဘာသာရေးတွင် ကြားနေရမည်။
၂) လူမျိုး ကွဲပြားမှုကိုလည်းကောင်း၊ ဘာသာ ကွဲပြားမှုကိုလည်းကောင်း၊ ယောက်ျား/မိန်းမ လိင်ကွဲပြားမှုကိုလည်းကောင်း အခြေပြုကာ နိုင်ငံတော်အတွင်း ရာထူးဌာနအရ အလုပ်အကိုင်များရရှိရေးတွင် ချုပ်ချယ်မှုများ မရှိစေရ။
၄) ပညာရေးကို လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ကျား/မ မရွေး သင်ကြားနိုင်ခွင့် ရှိရမည်။
၅) လူမျိုးကွဲပြားသူများသည် မိမိတို့ သီးသန့်ယဉ်ကျေးမှုကို ပိုင်ခွင့်ရရှိရမည်။ ဥပမာ ကရင်များအတွက် ကရင်ကျောင်းများ၊ ရှမ်းများအတွက် ရှမ်းကျောင်းများ ကရင်များအတွက်ကရင်နေ့များ၊ ရှမ်းများအတွက် ရှမ်းနေ့များ၊ ကရင်များအတွက် ကရင်ဘာသာကို အစိုးရရုံးသုံး ကျောင်းသုံးဘာသာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကရင်အမျိုးသားအဝတ်၊ ကရင် ခရိုင်ဓလေ့ထုံးစံတို့ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကရင်စာပေ ယဉ်ကျေးမှုများကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း စသည်တို့ပင်ဖြစ်သည်။
၆) လူမျိုးများ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခွင့်အရေးများကို တတ်နိုင်သမျှ ဥပဒေအားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုရမည်။
၇) ဗမာများထက် အဆင့်အတန်းနိမ့်သော လူမျိုးများ၏ အဆင့်အတန်းများကို မြှင့်တင်ရန် အထူးကြိုးစား ဆောင်ရွက်ပေးပြီးလျှင် ဗမာများနှင့် အတူ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းသို့ အမြန်ဆုံး တက်လှမ်းနိုင်ရမည်။ လူမျိုး အချင်းချင်း နှိမ့်ချသည့် အသုံးအနှုန်း၊ အခေါ်အဝေါ်၊ စာပေအမှတ်အသား၊ အထိမ်းအမှတ် အလံ အစရှိသည်တို့ကို အစိုးရက ဥပဒေတား မြစ်ပေးရမည်။ လူမျိုးများညီညွတ်မှုကိုသာ ရှေ့ရှုအမှတ်အသားအထိမ်း အမှတ် စာပေများကိုသာ သုံးရမည်။ အထက်ပါအချက်တို့ကား ကျွန်ုပ်၏ သဘောထားပုံကို သိသာစေရန် ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသဘောထားအတိုင်း အထမြောက်ရန် ကျွန်ုပ်သည် အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းသွားမည်ကို ရဲဘော်တို့အား စကားလက်ဆောင်ပါးလိုက်သည်။ xxx
(၁၉၊ ၂၊ ၄၅)
ဤသဝဏ်လွှာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်၏ မှန်ကန်သော အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သော သဘောထားရည်တည်ချက်များကို လေးစားဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ရပေသည်။ အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်ရေး အကြိုကာလတွင် ဗိုလ်ချုပ်၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ် သဘေားထားနှင့် ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်များကို ပီပြင်ထင်ရှားစွာ တွေ့လာရပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်သည် ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်းများတွင် ထင်ဟပ်လျက်ရှိပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် လွတ်လပ်ရေးရယူရာ၌ ဗမာပြည်ကိုသာမက တောင်တန်း ဒေသများကိုပါ ပူးပေါင်း၍တပြိုင်တည်း လွတ်လပ်စေလိုသည်။ တောင်တန်းဒေသများ မပါသော လွတ်လပ်ရေးသည် ဗမာပြည်၏ ပြီးပြည့်စုံသော လွတ်လပ်ရေးဟု မယူဆပေ။ ဘဝတူ တိုင်းရင်းသားများကိုလည်း လွတ်လပ်စေလိုသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးကို ဗမာများက စိုးမိုးခြယ်လှယ်ရန်အတွက် မဟုတ်ပေ။ တမျိုးသားလုံး၏ အကျိုးကို ရည်မျှော်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဘဝတူ ညီအကို တိုင်းရင်းသားများသည် အကွဲကွဲအပြားပြား ဆောင်ရွက်နေခြင်းထက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာ အကျိုးများနိုင်မည်ဟုပင် ယုံကြည်သည်။ ပူးပေါင်းသည်ဆိုရာ၌လည်း မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် ပူးပေါင်းရေးကိုသာ လိုလားပုံကို အောက်ပါ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက်များမှ သက်သေပြလျက်ရှိပေသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ယခုဘုရင်ခံမင်းကြီးတိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်နေသောနယ်များပါ ဗမာပြည်နှင့်တပြိုင်တည်း လွတ်လပ်စေရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ ဖဆပလ ၌လည်း ဤအတိုင်းအတာထား၍၊ အမှုဆောင်ဝန်ကြီးများကလည်း ဤ အတိုင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း (ဘုရင်ခံမင်းကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားချက်မှ)
နယ်စပ်ဒေသများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခက်အခဲရှိမည်မထင်ကြောင်း၊ ၄င်းတို့အား ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အလိုအလျောက် ပူးပေါင်းရန် သဘောကျကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အတင်းအကြပ် ပူးပေါင်းခိုင်းရန် မကြံရွယ်ပဲ ၄င်းတို့အနက်မှ အမှုဆောင်ဝန်ကြီးတဦး ခန့်ထားရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း။ (မန်ချက်စတာ ဂါးဒီယန်း သတင်းထောက်နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားချက်မှ)
ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း၊ တောင်တန်းနယ်များ ပြဿနာသာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း၊ တောင်တန်းနယ်များ မလွတ်လပ် သရွေ့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ပြီဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း၊ ဗမာများသည်တောင်တန်း လူမျိုးများကို ၄င်းတို့ဘာသာ အုပ်ချုပ် စေလိုကြောင်း၊ ဗမာများသည် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့၏ ပြည်တွင်းရေးကို စွက်ဖက်မည် မဟုတ်ကြောင်း (ပင်လုံတွင် ပြောကြားချက်မှ)
မြန်မာများသည် ဗြိတိသျှ၏ကျွန် မဖြစ်လိုကြောင်း၊ ထိုနည်းတူစွာ တောင်တန်းလူမျိုးများသည် ဗြိတိသျှကျွန်အဖြစ် မရောက်စေလိုကြောင်း၊ ထို့ပြင် တောင်တန်းလူမျိုးများသည် မြန်မာ့ကျွန်အဖြစ်လည်း မဖြစ်စေလို ကြောင်း (ပင်လုံတွင် ပြောကြားချက်မှ)
တိုင်းပြည်ကြီးပွားစေချင်ရင်- ဗမာကတမျိုး၊ ကရင်ကတဖုံ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့က တခြား အကွဲကွဲအပြားပြား လုပ်နေကြရင်ဖြင့် အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ဘူး၊ စုပေါင်းလုပ်ကြမှသာ အကျိုးရှိနိုင်မည်(ရှမ်းစော်ဘွားများတည်ခင်းသည့် ထမင်းစားပွဲတွင် ပြောကြားချက်မှ)
၄င်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိနေသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များ၏ပကတိ အခြေအနေများကို နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများနှင့် ပေါင်း စပ်ကာတင်ပြခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားရေး ဆိုင်ရာများကိုလည်း ဖဆပလ ပဏာမ ပြင်ဆင်မှု ညီလာခံ မိန့်ခွန်းတွင် ပီပြင်စွာတွေ့မြင်ရပေသည်။ (ဗိုလ်ချုပ်၏ တင်ပြချက်များ)
ဒီနေရာမှာ လူမျိုးရေးကိစ္စကို ဆွေးနွေးလိုတယ်။ အင်္ဂလပ်လိုမှာ- (Nation or Nationality, Race, Tribe) အစရှိသည်အားဖြင့် လူမျိုးရေးတွေ ကိုအသီးသီးခေါ်ထားတာရှိတယ်။ (Nation or Nationality) ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဥပမာ- ဗြိတိသျှလူမျိုးဆိုရင် အင်္ဂလိပ်၊ စကော့၊ ဝေလ၊ အိုင်းရစ် လူမျိုးတွေပေါင်းထားတာကို ခေါ်တာပဲ။
အမေရိကန်လူမျိုးဆိုရင်လည်း ဥရောပလူမျိုးစုံ အမေရိကန်မှာ လာနေပြီး အမေရိကန်လူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ လူအားလုံးကို ခေါ်တာပဲ၊ ဒီတော့ (Nation) သို့မဟုတ် (Nationality) ခေါ်တဲ့ လူမျိုးကြီးကိုဆိုကြပါစို့- အဲဒီ လူမျိုးကြီးဆိုတာ ဘယ်လိုအချင်းအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှ လူမျိုးကြီးလို့ခေါ်မလဲ။ အဲဒီလူမျိုးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို သရုပ်ဖေါ်ထားသလဲဆိုရင်လူမျိုး ကြီးဆိုတာ ရာဇဝင်အရဖြစ်ပွားပြီး၊ တည်တည်တံ့တံ့နေလာတဲ့သူ၊ ဘာသာစကားနဲ့၊ သူ့နယ်မြေနဲ့၊ သူ့စီးပွားရေးနဲ့၊ သူ့ယဉ်ကျေးမှု ပညာ ထုံးစံဓလေ့နဲ့ညီညွတ်စည်းရုံးထားတဲ့ လူပေါင်းစုပဲလို့ သရုပ်ဖေါ်ပြခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာ လူပေါင်းစုဆိုတာဟာ (A Nation is notaracial or Tribal community of people) လို့အတိအလင်းဖေါ်ပြထားတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူမျိုးကြီးဆို တာ အသွေးအဆင်တူတဲ့ (Race) တို့ (Tribe) လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးစုမျိုးမဟုတ် ဘူး၊ အဲဒီ (Race) တို့ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ရှင်းလင်းပြန်တယ်။ x x x
ဒါဖြင့် အဓိပ္ပါယ်က ဘယ်လိုသဘောလဲ။ လူမျိုးကြီးဆိုတာ အချင်း ချင်းပေါင်းသင်းနေရင် (Ragional autonomy) ဆိုတဲ့ နယ်မြေအရ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီး၊ ခွဲထွက်ခွင့်ပါရထိုက်သတဲ့ (The right of self-determi-nation means thatanation can arrange its life according to its own will. It has the right to arrange its own life on the basis of autonomy. It has the right to enter into federal relation with other nation. It has the right to complete secession) လို့ဆိုထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆက်ပြော ထားတာ ရှိသေးတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို လူမျိုးကြီးဆိုတာတိုင်း ရထိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် နေရာတကာမှာ အမြဲတမ်း မဟုတ်ဘူး ကောင်းကျိုး လုပ်ဖို့သာဖြစ်တယ်။ ဆိုးကျိုးလုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြောထားတယ်။ လူမျိုး အချင်း ချင်းချယ်လှယ်လွှမ်းမိုးမှု၊ နှိပ်စက်မှု မဖြစ်ရအောင် ဒီအခွင့်အရေးမျိုးကို လူမျိုးကြီးတိုင်းကို ပေးထားတာပဲ။
ဒါတွေအားလုံးðခံလိုက်တော့ ဘာအဓိပ္ပါယ်ထွက်သလဲဆိုရင် လူမျိုး ကြီးဆိုတာ အချင်းချင်းပေါင်းကြရင် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အရ ပေါင်းကြ။ ဒါပေ မယ့် နေရာတကာ အချိန်အခါတိုင်းမှာ အခြေအနေအကျိုးအကြောင်းကို မထောက်ပဲ အရမ်းကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ ဒါက (Nation or Nationality) ဆိုတဲ့လူမျိုးကြီးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိသင့်သိထိုက်သော သဘောတရားတွေပဲ။ ပြီးတော့ -
x x x ဒီဟာတွေကတော့ လူမျိုးရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သိထိုက်တဲ့အချက်တွေပဲ။ ပြီးတော့ လူမျိုးရေး လူနည်းစုဆို တာ လူဦးရေးဘယ်လောက်ရှိမှ လူမျိုးရေးလူနည်းစုခေါ်မလဲဆိုတာကို သိဖို့ လိုတယ်။ အရင်စစ်မဖြစ်ခင်ရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံအသင်းချုပ်ကြီးက သရုပ်ပြဌာန်းထားတာကတော့ လူမျိုးရေးလူနည်းစုဆိုတာ လူမျိုးရေးလူများစုရဲ့ ငါးပုံတပုံလောက်ရှိမှ လူမျိုးရေးလူနည်းစုလို့ ခေါ်နိုင်မယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ ရှမ်းပြည်မှာ လူမျိုးပေါင်း (၂ဝ-၃ဝ)လောက်ရှိတယ်။ အဲဒီလိုသာ လူမျိုးကွဲတိုင်း လျှောက်ခေါ်နေရင် ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လူဦးရေ သတ်မှတ်ရတာပဲ။ သို့ပေမယ့် ဗမာပြည်အဖို့မှာ လူမျိုးရေး လူများစုရဲ့ ငါးပုံတပုံဆိုတာကတော့ များလွန်းအားကြီးတယ်ထင်တယ်။ ဆယ်ပုံတပုံ လောက်ရှိရင်ပဲလူမျိုးရေးလူနည်းစုလို့ ခေါ်သင့်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ လူမျိုးရေး၊ လူများစုရဲ့ ငါးပုံတပုံရှိမှ လူမျိုးရေးလူနည်းစု ဆိုရင်တော့ ဗမာပြည်မှာ လူမျိုးရေး၊ လူနည်းစုကို မရှိနိုင်တော့ဘူး။
x x x ဒီတော့ လူမျိုးရေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော် တော်တော်စုံစုံ လင်လင်ပြောပြပြီးတဲ့နောက် ကျနော်တို့ ဗမာပြည်သစ်ကို တည်ထောင်တော့ ပြည်ထောင်စုသဘောတည်ထောင်မလား၊ လူမျိုးကြီးတမျိုးတည်းပဲဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်မျိုး (Unitary State) တည်ထောင်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဆိုလိုတယ်။ ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင်တော့ အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးအရ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးတွေကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ (Unitary State) လူမျိုးကြီးတမျိုးဆိုတဲ့ နိုင်ငံမျိုးတော့ ထောင်လို့မဖြစ်ဘူး။ ပြည်ထောင်စုသဘောမျိုးပဲဖြစ်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ပေါင်းကာမှ ဆေးအတွက် လေးဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုမျိုးတစိတ်တဒေသက တခုလုံးကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမျိုးဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ပြည်ထောင်စုဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို စုပေါင်းပြီး စနစ်တကျ စီစဉ်နိုင်မယ့် ပြည်ထောင်စုမျိုး ဖြစ်ရမယ်။ ဒါမှ လူမျိုးအားလုံး တိုင်းသူပြည်သားအများဆုံး တိုးတက်မှုကို လုပ်နိုင်မှာပဲ။ ပေါင်းတယ်ဆိုတာ အချင်းချင်း ကောင်းကျိုးရှိအောင် ပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီး ဆိုးကျိုးရှိအောင် ပေါင်းတာမျိုး ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒီလိုလူမျိုးရေး ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက် အကြောင်းပေါ်ရင် ပေါ်သလို ဆွေးနွေးသင့်ရင် ဆွေးနွေးပါအုံးမယ်။ အခု မိန့်ခွန်းမှာတော့ ဒီ လောက်နဲ့ပဲတော်လောက်ပြီလို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ (ဖဆပလ ပဏာမပြင်ဆင်မှုညီလာခံမိန့်ခွန်းမှ)
မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကရင်၊ ကချင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည့် လူမျိုးများအပြင် အခြားလူမျိုးအများအပြားလည်း စုဖွဲ့ပေါင်းစည်း နေလျက်ရှိကြပေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုက်လျက် ရှိကြသောလူမျိုးများ၏ အခြေအနေမှာလည်း စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့် မညီမညာ အဆင့်ဆင့် ကွဲပြားခြားနားပြီး အချို့မှာ အလွန်ခေတ်နောက်ကျလျက် ရှိကြပေသည်။ ထို့ကြောင့် လူမှုရေးပုံစံစနစ်များအစ ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်း ဓလေ့များနှင့် နေထိုင်ပုံများပါ ကွဲပြားလျက်ရှိပေသည်။ ဤကဲ့သို့စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှု အဆင့်ဆင့်ကွဲပြားမှုသည် လူမျိုးတမျိုးနှင့်တမျိုး နားလည်မှုလွဲမှားပြီး မယုံ မကြည်မှုများကို ပေါ်ပေါက်စေနိုင်ပေသည်။
ထို့အပြင်စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုစသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အားဖြင့် အဆင့်ဆင့်ကွဲပြားနေပြီး အချို့မှာ အလွန် ခေတ်နောက်ကျလျက် ရှိနေခြင်းကြောင့်ယင်းအခြေခံများနှင့်ကိုက်ညီသောတိကျသည့်သဘောထား မူဝါဒတရပ်ကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရေးသည်လည်း အလွန်ခက်ခဲ နက်နဲသောပြဿနာတရပ်ဖြစ်ပေသည်။ မည်သို့ပင်ရှိစေ ဤပြဿနာကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ပကတိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီစွာ လက်တွေ့ကျကျ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပေသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်၏ ပြည်ထောင်စု(ဝါ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ် သဘေားထားကိုလည်း လက်တွေ့ပြသရာလည်း ရောက်ပေသည်။